REAL FACE OF MAOIST LEADERS
grgDai 3772 days ago
pixie 3772 days ago
Messiah 3772 days ago
pixie 3771 days ago
HomLal 3771 days ago
Drkanchho 3771 days ago
More by pixie
chances of communal violence in Nepal??
AOS i 485 ko bare ma
ead being processed seperately
What do men want in thier birthday??
surving the bad credit history
are you an AVERAGE person too?
OUR PEOPLES REPRESENTATIVES
This is how Indians hold Authorities Accountable
career advice for young person
H1b buyingahouse
business analyst anyone?
what is the process to get H1B sponsered from F1 visa (going to Grad school)?
for those who havent watched this
See more by pixie
Visitor is reading english premier league
Visitor is reading Anyone familiar with IRS for 843?
Visitor is reading TO the Admin of Sajha.com - SAN or ***NAS***
Visitor from DE is reading How crazy is this guy?
Visitor from US is reading Damn Sexy !
Visitor is reading Just got job offer with green card on TPS. Should I take off
Visitor is reading Lets Enlighten: Obama Vs McCain
Posted on 05-25-11 8:55 AM Reply [Subscribe]
माओवादी सचिवका परिवारमा बुहारीमाथि अत्याचार, बुहारीको एक्सक्लुसिभ बयान
बिहेमा कम दाइँजो ल्याएको भन्दै एकजना माओवादी नेताले बुहारीमाथि गरेको अत्याचार निकै कहालीलाग्दो छ । दाइँजोमा सोफा नल्याएको निहुँमा माओवादी नेता सीपी गजुरेलकी बुहारी सुनिता गजुरेलले कस्तो ताडना सहिन् ? सुनिता गजुरेलले विश्वसन्देशलाई दिएकी छिन्, एक्सक्लुसिभ बयान ।
म सुनिता गजुरेल ससुरा चन्द्रप्रसाद गजुरेल (सीपी गजुरेल) केन्द्रीय सचिव, एकीकृत नेकपा माओवादी) की बुहारी तथा उहाँको कान्छो छोरा सञ्जीव गजुरेलको श्रीमती हुँ । हाम्रो विवाह २०६३–१०–४ गते हाम्रो परिवार र हामी दुवै जनाबीचको कुराकानी र सहमतिपश्चात सामाजिक परम्पराअनुसार भएको थियो । विवाहको प्रस्ताव उहाँहरुबाटै आएकाले मैले स्वीकार गरेकी थिएँ ।
विवाहको तत्कालै सासू कल्याणाी गजुरेल र ससुरा सीपी गजुरेल चितवनतिर घुम्न जानुभयो र फर्केको करिब दुई तीन दिनपछि फेरि दिल्ली भ्रमणमा जानुभयो । उहाँहरु फर्किसकेपछि सासू कल्याणी गजुरेलले बेला–बेलामा सम्पत्ति अर्थात् दाइँजोको कुरा निकाल्नुहुन्थ्यो । स–साना घरायसी कुरामा बिनाकारण गाली गर्नुहुन्थ्यो । मैले यस्ता कुरालाई सामान्य रुपमा लिन्थें । एक बुहारीको हिसाबले केही पनि जबाफ फर्काउन्नथें । तैपनि हामी दुई (सञ्जिव र मेरो ) को सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो ।
विवाह भएको करिब एक महिनासम्म माइती घर गएका थिएनौं । त्यसैले माइती जाने सल्लाह भयो । हामी दुवै जना माइतीपछि हाँसीखुसी घर फर्कियौं ।
हामी माथि कोठामा पुग्यौं र मैले हाम्रो रीतअनुसार आफूले ल्याएका सामान कोसेलीहरु राखी ममीबुबालाई ढोगी दिएँ । उहाँले मैले ल्याएको कोसेली पनि फुकाउनुभएन । ‘यसले मेरो हिराजस्तो छोरालाई कस्तो पारी’ मलाई कम्ता भा को छ । यस्ती उस्ती भन्दै गाली गर्नुृभयो ।
एक दिन त बुबाले पनि सबै जना खाना खान बसेका बेलामा ममीले यसले ल्याएको दाइँजो गाग्री चुइने र छ भन्नुभयो ममीले त्यति भन्नासाथ बुबाले ए गाग्रीसमेत चुइने र छ ! भन्नुभयो ।
तैपनि दुई–तीन दिनसम्म आफन्तकोमा ढोगभेट चल्यो । त्यसै गरी दिनहरु बित्दै गए । म बिहान घरको काम गरेर अफिस जान्थें र बेलुका फर्केपछि घरका अन्य काम गरेर सुत्न जान्थें । मेरो दिनचर्या यस्तै थियो ।
समय अगाडि बढ्दै गयो । मेरो श्रीमान्ले ममीको कुरामा चित्त नदुखाउनू, म छँदैछु नि भन्नुहुन्थ्यो । म पनि मेरो श्रीमान् असल हुनुहुन्छ भन्दै चित्त बुझाउँथे ममीका कुरालाई वास्ता गर्दिनथें । यसै क्रममा हामी माइतीतिरबाट फर्किएको करिब १०–१२ दिनपछि बुबा युरोप भ्रमणका लागि जानुभयो र ममी चाहिँ गाउँ जाने कुरा चलिरहेको थियो । तर ममी गाउँ जानुभएन ।
ममीले बिस्तारै बिस्तारै झन्झन् अप्ठ्यारो पार्दै जान थाल्नुभयो । एक दिन, दुई दिन गर्दागर्दै उहाँहरुले मैले पकाएको खाना नखाने आफंै पकाएर खाने गर्न थाल्नुभयो । मैले कति अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मान्नु हुन्नथ्यो ।
मेरो पेटमा बच्चा पनि आइसकेको रहेछ, शंका लागेर टेस्ट गराउँदा साँचो निस्कियो । ममीले ‘तँ मेरो छोरालाई छोड्दे र आफ्नो बाटो लाग मात्र भनिरहनुहुन्थ्यो । हाम्रो घरको स्थिति साह्रै तनावपूर्ण थियो । ममीले त्यो व्यवहार गरेपछि सबैलाई टेन्सन हुनु स्वाभाविकै थियो । बुबाकै अगाडि ममीले यस्तो निकृष्ट व्यवहार गर्दा म ससुरा बुबासँग सहयोग र विश्वासको अपेक्षा गर्दथें । उहाँले हस्तक्षेप गरी घरको स्थिति मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थें, तर किन हो कुन्नि बुबा चुपचाप केही नबोली मेरो त्यो दुर्दशा हेरिरहनुहुन्थ्यो ।
यसैक्रममा श्रीमान्ले अचानक मेरो पेटमा बढिरहेको बच्चा फाल्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । म झसंग भएँ । रुन मात्र आयो केही बोल्न सकिन । आफ्नो भाग्य सम्झेर घरमा अफिसमा जतिबेला पनि रुन मात्र आउँथ्यो, रोइरहन्थें । त्यो बच्चा मेरो लागि सञ्जिवको अनुपम उपहार थियो ।
म जसरी पनि त्यो बच्चा जन्माउन चाहन्थें । बेलाबेलामा माइतीतिर गएर बच्चा जन्माउँ कि जस्तो विचार पनि आउँथ्यो । तर विवाह भैसकेकी चेली माइतीमा गई बच्चा जन्माउँदा सामाजिक प्रश्न उठ्थ्यो त्यसैले हिम्मत गर्न सकिन ।
श्रीमान् बच्चा फाल्ने कुरामा अडिग रहिरहनुभयो । मलाई कयांै पटक कन्भिन्स गरिरहनुहुन्थ्यो । आखिर हामी एकदिन हस्पिटल गयौं । डाक्टरले हाम्रोबारेमा सबै कुरा बुझेपछि पहिलो बच्चा नफाल्न नै सल्लाह दिए । मलाई अत्यन्त पीडा भयोे, म उहाँसँग धेरै रोएँ, म श्रीमान्को चित्त पनि नदुखोस्, र बच्चा पनि जोगाउन सकियोस् भन्ने कोसिसमा थिएँ । तर श्रीमान्ले भन्नुभयो– हेर सुनिता, अहिले मेरो राम्रो जागिर छैन, तिमी पढ्दैछौ, घरमा पनि यस्तो बबाल छ, भोलि बच्चा भएन भने मलाई पनि त कति टेन्सन हुन्छ, पछि अनेक उपाय गरौंला, केही नलागे टेस्टट्युब बेबीको पनि व्यवस्था छ । तिमी म भन्दा धेरै बुझ्ने पनि छौ । म तिमीसँग छँदैछु नि प्लिज मलाई साथ देऊ ।
अरु कुनै उपाय पनि थिएन । म बाध्य भएँ । मैले बच्चा फाल्नका लागि डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधिको प्रयोग गरें । डाक्टरकैै अगाडि एउटा र त्यसको ४८ घण्टापछि अरु औषधि प्रयोग गरें ।
औषधि खाएपछि बच्चा जाने क्रम शुरु भयो । बच्चा फालेको दुई दिनसम्म श्रीमान्ले राम्रो व्यवहार गर्नुभयो । तेस्रो दिनमा श्रीमान्ले अचानक मलाई सुनिता अब हामी सँगै बस्न सक्तैनौं अलगअलग बस्नुपर्छ भन्दै मलाई छाड्ने कुरा गर्नुभयो ।
म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । राति श्रीमान् अलग्गै कोठामा सुत्न जानुभयो । अर्को राति म सुत्ने तयारी गर्दै थिएँ । ममीले एक्कासि ‘यो केटीले के नाटक गर्दैछे भनेर गाली गर्न शुरु गर्नुभयो । श्रीमान् केही नबोली जुरुक्क उठेर ममीको कोठामा सुत्न जानुुभयो । त्यसपछि ममीले एकान्त पारेर मलाई धेरै फकाउन थाल्नुभयो । तँ पढेलेखेकी मान्छे । जति पनि केटा पाउँछेस् । अब तिमीहरुको त कोठा पनि अलग भैसक्यो तिमीहरुको सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदैन । (मैले अघिल्लो दिन श्रीमान्लाई किन छुट्टै सुतेको भन्दा उहाँले मलाई ज्योतिषले तीन दिनसम्म हामीलाई सँगै नसुत्नू भनेको छ भन्ने जबाफ दिनुभएको थियो) ।
ममीले अब यसरी चल्दैन यसका माइतीलाई बोलाइदिन्छु र छिनोफानो गरिदिन्छु भनेपछि म डराएर श्रीमान्लाई साँच्चै हजुरले पनि मलाई छोड्न नै खोजेको हो ? भन्दा हो, तिमीलाई मैले केही दिन पहिले नै भनेको हुँ तर तिमीले मजाक सम्झियौ । त्यस्तो कुरामा पनि कसैले मजाक गर्छ र ? हो, अब हामी सँगै बस्न सक्तैनौं, भन्नुभयो । मेरो आँखामा सञ्जिवको विश्वासकोे पट्टी लागेको थियो । त्यति गर्दासम्म पनि मैले पत्याइन ।
ममीले, माइतीलाई फोन गर्न भनी
दबाब दिनुभयो । मैले उहाँहरुलाई रुँदै फोन गरें र भेटघाट गर्ने कुरा पनि भयो । अनि म प्रभा दिदी (श्रीमान्को कान्छी दिदी, जसले हामीलाई विवाह गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो) कोमा गएर उहाँसँग घरमा ममीले, बुबाले र सञ्जिवले गर्ने व्यवहारका बारेमा सबै कुरा राखें ।
दिदीलाई घरमा सबैलाई सम्झाउनू र हामीलाई जसरी भए पनि मिलाइदिनुस् भन्दा तिमी पढेलेखेकी मान्छे किन चिन्ता गर्छौ । केही व्यवस्था भइहाल्छ नि, मिलाउन त खै कसरी मिलाउनु र भन्नुभयो । म त्यहाँ बसेर धेरै बेर रोएँ ।
मेरो गर्भपतन गराएका कारण म एकदम कमजोर अवस्थामा थिएँ । तैपनि ममीले मलाई झनै दुव्र्यवहार गर्न थाल्नुभयो । ममीले मलाई खाना दिन पनि गाह्रो मान्न लाग्नुभयोे । बेलाबेलामा भातसमेत खान दिनु हुन्नथ्यो । म धेरै पटक त्यो घरमा भात खान नपाएर तड्पेको छु ।
मेरो खुट्टा थरथर काम्थ्यो । श्रीमान्ले पनि वास्ता गर्न छाड्नुभयो । मैले उहाँलाई धेरै आग्रह गर्थें र सम्झाउँथें पनि । तर उहाँले मेरो कुरा सुन्नुभएन । केही दिनपछि बुबा युरोपबाट फर्किनुभयो । उहाँ आएपछि त समस्या सुल्झिन्छ भन्ने मैले सोचेकी थिएँ । बुबा आएको दिन भने सबैलाई खाना पकाएर खुवाएँ ।
त्यो दिन सबैले खानु पनि भयो । अर्को दिनदेखि मैले पकाएको खाना कसैले पनि नखाने हुनुभयो ।
बुबा फर्केको दुई–चार दिनपछि मैले सबै कुरा बताएँ र हजुरले छोरा, ममी र मलाई पनि राखेर कुरा गरिस्यो भन्दा उहाँले मलाई यस्तो जबाफ दिनुभयो– यो तिमीहरुको बीचको मामला हो, मैले कारण सोध्न मिल्दैन । वैज्ञानिक कारण पनि हो, कसैकसैको यस्तै हुन्छ । मैले पनि कान्छो छोरोको बिहे रहरले गरेको थिएँ । तिमीहरुको यस्तै भयो । अब तिमीहरुले आ–आफ्नो भविष्य कसरी राम्रो हुन्छ त्यो सोच्नुपर्छ । मेरो दायित्व, तिमीलाई बिहे गरेर ल्याएकी बुहारी हौ, मेरो खासै सम्पत्ति केही छैन । मलाई पनि पार्टीले पालिराखेको छ । तिमी आफ्नो कर्तव्य गर । सुजाता कोइरालाजस्ता पनि महिला छन् । त्यसपछि मैले बुबासँग म त्यस्तो संस्कारमा हुर्केको केटी पनि होइन । हजुरलाई थाहा छँदैछ, म सामान्य परिवारको छोरी हुँ । मेरो बुबा, ससुरा जे भने पनि हजुर नै हो । उहाँले बिस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्नुभयो । मैले उहाँसँग घरायसी समस्याको सकारात्मक पहलकोे अपेक्षा गरेकी थिएँ । तर निराश भएँ ।
एक पटक मसँग कत्ति पनि पैसा थिएन मैले श्रीमान्सँग पैसा माग्दै थिएँ । ममीले थाहा पाउनुभएछ । दौडदै हाम्रो नजिक आउनुभयो र मलाई हकार्दै भन्नुभयो ‘अझ तँ मेरो छोरासँग पैसा माग्छेस् तैंले बिहे गरेर आउँदा माइतीबाट के ल्याएकी थिइस् र ! काठको टुक्रासम्म ल्याएकी छैनस् ।’ समयसमयमा उहाँले मलाई धेरै नराम्रो–नराम्रो शब्द भन्दै गाली गर्नुहुन्थ्यो । रन्डी कस–कसको पेट बोकिस् र यहाँ आएर फालिस् भन्दै कति पटक उहाँले मेरो शरीरमा थुक्नुहुन्थ्यो ।
ममाथि अन्याय बढिरहेको थियो । मलाई त्यो घरमा कुकुरलाई जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो । मेरो कोठाको अवस्था पनि दयनीय थियो ।
बिहान अफिस जाने समय हुन्थ्यो, मैले पकाएको परिवारमा कसैले नखाने । अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, बुहारी मान्छे एक्लै पकाएर खान सक्दिनथें । भोकभोकै अफिस जान्थें । उहाँहरुले म अफिस गएपछि ढिलो पकाएर खाने गर्र्नुहुन्थ्यो । मैले अफिसतिर हल्काफुल्का नास्ता गर्थें, त्यतिबेला मेरो तलब ३००० (तीन हजार) थियो ।
म शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा कमजोर हुँदै गैरहेकी थिएँ । बेलुका घर आएपछि आफ्नै कोठामा एक्लै बस्थें । म सुत्ने पलङसमेत ममीले आफ्नो कोठामा लैजानुभएको थियो । बेलुका ममी र श्रीमान्ले खाना दिँदा कुकुरलाई दिएजस्तै गरी फ्यात्त फाली दिनुहुन्थ्यो । मलाई श्रीमान् छोड्नका लागि बारम्बार प्रेसर आउँथ्यो । तेरो स्वाभिमान छैन ? तँलाई हामीले यस्तो कुकुरको जस्तो व्यवहार गर्दा पनि तँ बसिराख्छेस् भन्ने कुरा बारम्बार हुन्थ्यो ।
मलाई घरबाट निकाल्ने कोसिसहरु भैरहन्थे । यति हुँदा पनि मेरोतर्फबाट श्रीमान्प्रतिको मायामा कुनै कमी आएको थिएन । म उहाँलाई धेरै नै माया गर्थें । मलाई त्यहाँ नरकीय जीवन बिताउन बाध्य पारिदै गयो ।
एक दिन बुबाले मलाई बोलाएर घरमा बस्न नमिल्ने कुरा गर्नुभयो । मलाई एक्लै (खैरमारा–महोत्तरी, जहाँ हाम्रो खेती छ) खैरमारा गएर खेतीपाती गरेर गृहस्थी सम्हाले राम्रो हुने सल्लाह दिनुभयो ।
त्यो कुरा चाहिँ मैले इन्कार गरें । मैले म उहाँहरुसँग घर बस्न नमिल्ने कारण सोधें । बुबाले आफूलाई पार्टीले पालेको र पार्टीमा यो कुरा उठिसकेकोले, छोराचाहिँ स्टाफका रुपमा बस्न मिल्ने तर म बस्दा अप्ठ्यारो पर्ने कुरा गर्नुभएको थियो ।
मैले बुबाको उक्त प्रस्ताव इन्कार गरिदिएँ । मलाई बारम्बार घर र श्रीमान् छोडिदिनका लागि दबाब आई नै रह्यो । मैले मान्दै मानिन ।
एकदिन ममी र श्रीमान्, छोरी (प्रभा दिदी) भएर दिदीकै घर भन्दा अलि तल दुईवटा कोठा खोज्नुभएछ । हामीलाई सार्ने कुरा भयो । मैले जान्न भनेर धेरै चोटी इन्कार पनि गरें ।
बुबा र मेरो श्रीमान्ले पल्लो कोठाबाट सुनिरहनुभएको थियो कसैले केही बोल्नुभएन । म त्यहाँ एकदमै निरीह प्राणीजस्तै भएँ । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै म नुहाएर कपडा धुँदै थिएँ, मेरो श्रीमान्ले आँखा मिच्दै मेरो नजिक आई कोठा सर्न भन्नुभयो ।
म केही बोल्न सकिन नुहाईधुवाई सिध्याएर माथि जाँदा मेरो सामान जति सबै गाडीमा हाल्न ठीक पारिसकेको रहेछ । तर मेरो श्रीमान्को एकदुई वटा सर्टहरु मात्र राखिएको रहेछ । मैले उहाँको सबै सामान हाल्ने कुरा गरें तर उहाँले त्यहाँ राख्ने ठाउँ छैन । मेरो लुगा खुम्च्याएर किन राख्नु पहिला दराज किन अनि मेरो सामान लगौंला भन्दै उहाँको सामान हाल्न रोक्नुभयो ।
मैले मेरो विवाहको गहनाका बारेमा सोधें, मेरो श्रीमान्ले तँ कति महत्वाकांक्षी रहिछेस् बल्ल थाहा पाएँ भनी उत्तर दिनुभयो । त्यो सबै गहनाहरु अहिले पनि उहाँहरु सँगै छ किनकि मेरा सबै गहना बिहे भएको केही दिनमै उहाँहरुले राख्नुभएकोले मसँग कुनै गहनाहरु थिएन (गहनाका बारेमा छलफल नगरे मैले गहना मासेको आरोप आउने डरले मात्र मैले उक्त प्रसंग उठाएकी थिएँ) ।
त्यसपछि मैले बुबासँग कुरा गर्न पाउनुपर्ने कुरा गरे पनि बुबासँग कुरा गर्न दिइएन । मेरो श्रीमान्ले तँलाई मैले पाल्ने हो कि मेरो बुबाले भन्नुभयो । तैपनि मैले फेरि दुई–तीन पटकसम्म आग्रह गरें । मलाई बुबासँग कुरा गर्नै दिइएन र बुबाले पनि कुरा गर्न चाहनुभएन । कुरा गर्ने अनुमति नपाएपछि अन्त्यमा, बुबा म जान्छु है भनी बिदा माग्दा हुन्छ भन्नुभयो ।
मैले बिहान धोएर सुकाएको कपडाहरु घरमै भएकाले कपडा लिन दिउँसो अफिसबाट फर्कँदा पसें । तलैबाट फर्कन नरमाइलो लाग्यो र माथि चढें । म भित्र पसेको मात्र के थिएँ एक्कासि ममीले नराम्रोसँग चिच्याउनुभयो । किन ढोका खुल्लै पारेको, जो पायो त्यही मान्छे भित्र पसेको छ ।
ममी कराउन थालेपछि बुबाले आत्तिदै मेरो श्रीमान्लाई फोन डायल गर्नुभयो र उहाँले केके भन्नुभयो मैले सुनिन । म अकमक्क परिरहेँ । बुबाले विशाललाई फोन दिन भन्नुभएछ विशालजीले मलाई फोन दिनुभयो । मैले फोन रिसिभ गरें । श्रीमान्ले तँ किन त्यहाँ गा’की भनेर सोध्नुभयो । मैले हजुरहरु सबैजना किन यसरी आत्तिनुभएको । म त बिहान धोएर सुकाएको कपडाहरु घरमै भएकाले कपडा लिन आएको भनें । यता मलाई राखिएको कोठामा श्रीमान्ले खाना नखाने ३÷४ दिनसम्म राति ८÷९ बजेतिर आउने र बिहानै चाँडै हिँड्नुहुन्थ्यो । यो क्रम दुई–चार दिन जति जारी रह्यो त्यसपछि उहाँ आउनै छाड्नुभयो । तीन–चार दिन जति नआएपछि म एकदिन बिहानै घरतिर गएँ ।
मेरा दुई जोर लुगा बोकेर । त्यहाँ म आएको सबैले देख्नुभएको थियो । मलाई कसैले ढोका खोलिदिनुभएन । म बाहिरै बसिरहें । मेरो श्रीमान् दूध लिन तल झर्नुभयो । तर ढोका ममीले नै खोलिदिनुभयो र फेरि लगाउनुभयो ।
त्यसपछि मेरा श्रीमान् बाहिर आएर तँ यहाँ किन आएकी भन्नुभयो । मैले उहाँसँग तपाईं त्यहाँ कोठामा नबस्ने भएपछि म पनि एक्लै बस्दिन । त्यहाँ सबै केटैकेटा छन् । मलाई एक्लै बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ । म पनि तपाईंहरुसँग यहीँ बस्छु । केही समयपछि ढोका खुल्यो । म त्यही मौका पारी घरभित्र पसें । म कोठाभित्र छिर्नासाथ एक्कासि बुबाले यो अर्काको घरमा जबरजस्ती गर्ने को हो ? केको जबरजस्ती हो यो ? भन्नुभयो ।
बुबा बोलेको सुनी फरक्क पछाडि फर्केकी मात्र के थिएँ ममीले मलाई कपालमा समातेर बाहिर निकाल्नुभयो र ढोका बन्द गर्नुभयो । त्यसपछि कसैले ढोका खोलेन । म ढोका बाहिरै बसेर धेरै बेर रोइरहें र केही सीप नलागेपछि कोठामै फर्किएँ ।
केही घण्टापछि श्रीमान् डेरामा आएर, आफूलाई के सम्झेकी छस् अब फेरि यस्तै जबरजस्ती गरिस् भने तँलाई वाईसीएलका महिला ल्याएर कुटाउँछु भन्दै फेरि त्यस्तै नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँ हिँड्नुभयो र आउनु नै भएन ।
यस्ता दिनहरु बिताउन बाध्य भएँ । यसै क्रममा सोही वर्ष कात्तिक १२ गतेको कुरा हो । मैले कसैबाट ममीबुबा युरोप जानुभएको र मेरो श्रीमान्चाहिँ कोही अरु नै केटीसँग बसेको भन्ने सुनें ।
अफिसबाट आउनासाथ उहाँ बसेको घरमा गएँ । उहाँ कम्प्युटर चलाएर बसिराख्नुभएको थियो । म जानासाथ मलाई उहाँले कपालमा समातेर बाहिर निकाल्न खोज्नुभयो । मैले पनि जबरजस्ती गरें । हामीबीच भनाभन पनि भयो र उहाँले मलाई धेरै नै पिट्नुभयो । मलाई पनि खपिनसक्नु भएकाले मन शान्त पार्न २÷४ कुरा मुखले सुनाएर आफन्तको कोठातिर लागें ।
त्यसपछि २०६४ कात्तिक १३ गते म यी सबै विवरणहरु लिएर न्यायको आशामा नेकपा माओवादी पार्टीमा लिएर गएकी थिएँ । न्याय पाउने आशामा मैले नेकपा माओवादीका जिम्मेवार नेतासँग यी सबै कुराहरु राखेकी थिएँ । उहाँले मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो ।
यो कुरा हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो । तपार्इं के चाहनुहुन्छ ? भन्ने कुरा गर्दा अंकल म सञ्जिवसँगै बस्न चाहन्छु भनेकी थिएँ । उहाँले मलाई त्यो केटालाई मैले चिनेको छैन, मैले सिधै कुरा गर्ने भनेको गौरवजी (सीपीजी)सँग हो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म कुर्नुस्, म यो कुरा केन्द्रीय कमिटीमा पनि राख्छु । तपार्इं यी सब विवरण राखेर केन्द्रीय कमिटीमा एउटा निवेदन दिनुस् भन्नुभयो ।
मैले पनि उहाँकै सल्लाहअनुसार त्यही गरें । त्यसपछि बुबाममी पनि फर्किनुभएपछि पुस महिनामा सञ्जिव र म दुवै जनालाई पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बोलाइएको थियो । हामीलाई त्यहाँ पनि एकराज भण्डारी (जो अहिले सभासद् हुनुहुन्छ, उहाँले नै हाम्रो केस डिल गर्नुभएको थियो) उहाँले हामीलाई मिल्नकै लागि सल्लाह दिनुभयो । चुनावको व्यस्तताका कारण, पछि समय दिन सक्नुभएन । तर समयसमयमा सञ्जिवको बिहेका लागि केटी खोज्ने कार्य जारी भैरहेको कुरा सुन्नमा आइरहन्थ्यो ।
चुनावको लगत्तै मेरो श्रीमान्ले (वैशाखतिर) सम्बन्धविच्छेदका लागि काठमाडौं महानगरपालिका फिराद दर्ता गराउनुभएछ । त्यसपछि हाम्रो समस्या सार्वजनिक भयो र मिडियामा पनि आयो ।
कतिपय मिडियाहरु मलाई खौज्दै आइपुगे । मैले सुरुमा आफ्नो समस्या राख्न इन्कार गरें । सम्बन्धविच्छेदको कुरा थाहा पाएपछि म अत्यन्त विक्षिप्त भएँ । म एकदम हतास मनस्थितिमा थिएँ । मलाई कानूनी कुरा केही थाहा थिएन । केही शुभचिन्तकहरुले मुद्दामा वकिल राखी प्रतिउत्तर लगाउनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । फेरि मलाई वकिलबारे कुनै आइडिया थिएन । मुद्दा लड्न धेरै पैसा लाग्छ रे भन्ने सुनेकी थिएँ ।
मसँग पैसा पनि थिएन । यता काठमाडौं महानगरपालिकामा श्रीमान्ले सम्बन्धविच्छेदको फिराद दर्ता गराउनुभएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिरह्यो । त्यहाँको कानून अधिकृत र अरु मध्यस्थकर्ताकोे सहयोगमा धेरै चोटि छलफल चल्यो । म सञ्जिवभन्दा अलग बस्न नसक्ने र उहाँ मसँग बस्न नखोज्ने, मिल्नका लागि मेरो श्रीमान्लाई सम्झाउनुभयो । त्यहाँबाट पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन । त्यसपछि नगरपालिकाले केस जिल्ला अदालतमा पठाइदियो ।
नगरपालिकाबाट मुद्दा जिल्ला अदालत जानेबेलामा मैले केही मानवअधिकारवादी संस्थाको नाम सुनेकी र उनीहरुले पीडित महिलाको तर्फबाट मुद्दा लड्छन् भन्ने पत्रिकामा पढेकी थिएँ । म सहारा खोज्दै माइती नेपाल र ओएचसीएचआरमा गएँ । माइती नेपालले जिल्ला अदालतमा चालिनुपर्ने कदमका लागि केही वकिलहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाई मलाई अर्को दिन बोलायो ।
वकिलको सल्लाहबमोजिम मैले प्रतिउत्तर लगाउने भएँ । मैले मेरो वकिललाई म सञ्जिवबाट अलग हुनु नपर्ने तरिका बताउन अनुरोध गरें । उहाँहरुले मानाचामल र अंशमुद्दा हाल्नुपर्ने यस्तो प्रक्रियाले सञ्जिवलाई मसँगको सम्बन्ध कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
मैले पनि त्यही गरे । (तर मानाचामल र अंशमुद्दाले मेरो र सञ्जिवको सम्बन्ध झन् छिटो टुङ्गिने थाहा पाएपछि उक्त मुद्दाहरु दुवै फिर्ता लिएँ । किनकि त्यो मुद्दा हाल्नुको उद्देश्य सम्पत्ति लिनुखानु नभई सञ्जिवसँग जीवन बिताउने आधार तयार पार्नुथियो) म सञ्जिवलाई गुमाउन चाहन्नथे । त्यसैले ओएचसीएचआरमा पनि गएँ । त्यहाँका अधिकृतहरुले सबै घटना विवरण बताउन भन्नुभयो । मैले पनि बताएँ ।
जिल्लामा हाम्रो सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हेर्ने माननीय न्यायाधीशज्यूसमक्ष म त्यो बेञ्चमा धेरै चोटि रोएकी छु । मैले माननीय न्यायाधीशज्यूलाई धेरै आग्रह गरें । कि मेरो परिवारले मलाई अन्याय गरे पनि अदालतसमेत लागेर मसँगबाट मेरो श्रीमान् जबरजस्ती नछिन्नुस् । म मेरो श्रीमान्लाई एकदमै माया गर्छु । ऊ पनि मलाई माया गर्छ तर किन हो कुन्नि परिवारको अगाडि डराउँछ । म सञ्जिवबाट अलग बस्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सक्तिन । मैले श्रीमान् छोड्नुपर्ने कुनै अपराध गरेकी छैन । कि त परिवार वा अदालतले मेरो गल्ती के हो देखाइदेओस् । कि त मलाई न्याय दियोस् । मसँग नगरेको गल्तीको सजाय भोग्ने हिम्मत छैन ।
एकदिन जिल्ला अदालतले मेरा लागि सम्बन्धविच्छेद हुने गरी एकदमै कठोर फैसला गरिदियो । त्यसपछि म अन्यायमाथिको अर्को अन्यायको बोझ बोकेर न्यायका लागि पुनरावेदन गएकी छु । पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
फेरि मेरो श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेर लुकाइराखेको खबरहरु सुन्नमा आयो । हल्लाको पछाडि केही छ जस्तो लागेर अलि विश्वासिलो स्रोतबाट बुझ्ने कोसिस गरें । विवाह गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा आएको छ । तर यो खबरलाई गजुरेल परिवारले अत्यन्त गोप्य राखेको हुनाले त्यसको डिटेल इन्फरमेसन चाहिँ पाउन सकेको छैन । श्रीमान्ले गएको असारमा विवाह गरेर दशैंमा गाउँ खयरमारामा लगेको भन्ने खबर सुनेकी छु ।
त्यस खबरले मलाई साह्रै विक्षिप्त पा¥यो र मैले मेरो श्रीमान्लाई पटकपटक सम्पर्क गरी यथार्थ कुरा बताउन अनुरोध गरें ।
मैले त्यसको बारेमा जान्नलाई तीन पटकसम्म मेरा ससुरा सीपी गजुरेललाई फोन गरें, तर मेरो फोन उहाँले काटिदिनुभयो । फेरि मैले सञ्जिवको दिदी–भिनाजु र दाइलाई फोन गरेर बुझ्ने कोसिस गरें । तर, उहाँहरुले पनि रेस्पोन्स गर्नुभएन ।
म न्यायका लागि पुनः एकपटक माओवादी पार्टीमा आएकी छु । म त्यो जिम्मेवार परिवारबाट सोच्नै नसकेको अन्याय भोग्दै आइरहेकी छु । म न्यायका लागि धेरै पटक धेरैतिर भौंतारिएको छु । मैले सुनेअनुसार मेरो चरित्रमा दोष देखाउनका लागि धेरै नराम्रा लाञ्छना लगाई चरित्रहीन केटी हो, त्यसैले हामीले घरबाट निकालेको आदि–इत्यादि झूटा आरोपहरु लागाइएको रहेछ ।
यी सबै कुराहरु शतप्रतिशत झूठा हुन् । मैले कसैलाई पनि केही नराम्रो भनेकी छैन र कसैलाई मैले नराम्रो गरेको पनि छैन । मेरो चरित्रमा खोट देखाउने कुरा भएमा मसँग प्रत्यक्ष कुरा होस् जाँचबुझ गरियोस् र प्रमाणित भएमा सजाय भोग्न तयार छु ।
जहाँसम्म दाइँजोको कुराको सम्बन्धमा हाम्रो दुवै पक्षबीचमा कसरी विवाह गर्ने, दाइँजो केकति गर्ने भनेर मेरा आफन्त दाजुहरु सल्लाह गर्न जानुभएको थियो । त्यतिबेला आफ्नो गच्छेअनुसार माइतीतर्फबाट सामान्य चलनचल्तीअनुसार अरु सबै थोक गरेको (बैंक ब्यालेन्ससमेत गरेको) तर सोफालगायतको फर्निचर चाहिँ उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ला (दुनियाले देख्दा के भन्लान् ?) भनेर नदिनुभएको हो ।
म एक सामान्य परिवारको छोरी भएकीले सम्भ्रान्त परिवारको छोरीको जस्तो दाइँजो ल्याउने क्षमता ममा थिएन र छैन । मेरो माइती कुनै राजनीतिक परिवार पनि होइन । सामान्य किसान परिवार हो । तर पनि मेरा बाबाआमाले दुःख गरी एमएसम्म पढाउनुभएको छ ।
बिहेमा कम दाइँजो ल्याएको कारणले आज मैले सारै पीडा झेल्नुपरेको छ । त्यसको असर भविश्यमाथि पारेको अन्धकारले आफूलाई साह्रै चिन्तित पनि तुल्याएकोे छ । सोफा नल्याएकै कारणबाट चेलीको घर बिग्रिएपछि मेरा माइती पनि अत्यन्त पछुताउनुभएको छ । मेरो माइती अहिले पनि गजुरेल परिवारलाई सक्दो सम्मान दिन तयार हुनुहुन्छ ।
न्याय माग्दै सुनिताले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष दिएको निवेदन
न्याय पाऊँ...............................................READ FULL ARTICLE AT http://www.vishwanews.com/2011/05/22/7865.html
Last edited: 25-May-11 09:00 AM
Posted on 05-25-11 1:42 PM [Snapshot: 329] Reply [Subscribe]
नाज हजुर अङ्रेजी राप गीत गाउने अनी सेक्स को कुरा गरी मोदेर्न देखौन खोज्नेको मुख्बाट दाईजो साइजो को कुरा सुहाएन है । पिक्सी सँग केही पर्सनल मिस्अन्दरस्तन्दिङ भये अर्कै कुरा भो तर एक अबला नारी माथि भएको अत्त्याचर को साइद लिनु भएको आपत्तिजनक महसूस हुनगएको छ ।
Posted on 05-25-11 1:52 PM [Snapshot: 338] Reply [Subscribe]
i dont know how to debate with this nas dai......j bhane ni ulto ulto kura garchan He always has to play the devils advocate...but i know he is suchasoftie inside....peace nas dai!!!!
Posted on 05-25-11 5:37 PM [Snapshot: 672] Reply [Subscribe]
Pixie isacute nickname.
But onaserious note, this again shows what they're all about. I wish they were all exiled or something.
Posted on 05-26-11 10:59 AM [Snapshot: 1059] Reply [Subscribe]
Friends...can u believe this..I think these chor maobadis have now hacked the source site and now the link cannot be opened!!! Thankgod I had copied the content .. I seriously hope that the Buhari will be safe and sound.
Posted on 05-26-11 1:52 PM [Snapshot: 1170] Reply [Subscribe]
यो समाचार अनुसार सुनिता गजुरेलले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै कुरा गरिछन र सबै (माओवादी, वकील, अदालत, देखि मानव अधिकारबादीसम्म) को ढोका ढक्ढक्याईछन। सायद अन्याय नपरेको भए यसरी न्याय खोज्दै भौतारिन उनलाई ताकत आउँदैनथ्यो होला। मेरो अनुमानमा सायद उनले अरु मिडिया र ब्लगहरुमा नि आफ्नो दुखेसो पोखिन होला (विशेष गरी त्यो माईसन्सार)! समाचार छाप्ने कसैको आँट आएन जस्तो छ। एउटाले बल्ल बल्ल लेख्या समाचार नि धम्की खप्न सकेन जस्तो छ - समाचार त के डोमेन नै गायब।
यो पार्टी र यो नेता भन्दा नि, सक्नेले मौकामा चौका हान्ने कुसंस्कारले चै हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेछ। खासगरी गरीव र नारीको मुद्दालाई हतियार बनाएर माथि उठेका तथाकथित पार्टी/नेताले यो कुरालाई किन संवोधन गर्न नसक्ने? कि 'सफाया' बाहेक अरु न्याय जनअदालतले दिंदैन?!
Posted on 05-26-11 2:37 PM [Snapshot: 1232] Reply [Subscribe]
sabaijana taak pare tiwari, natra gotame bhanya jastai hun. communism le k bhanchha? garib ra pidit haruko haatma power hunuparchha, sabailai saman byabahar garnuparchha bhanchha tara yinai communist netaharuko gharma yesto hunchha. it's sad to say, but i don't think she will get justice. if you want justice, you either need power or money. she has none, and to make things more complicated, maaobaadi is against her. prachande le ni kehi gardaina, herdai jaau -tyo mulo ni aru jastai chor ta ho ni if not worse.